Kedu ihe eji arụ ọrụ igwe? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Mechanical doping ịgba ígwè - inogide ngwọta
Mechanical doping ịgba ígwè - inogide ngwọta
Kedu ihe eji arụ ọrụ igwe?
Okporo ụzọ anyịnya igwe na zoro ezo Motors abụghị kpọmkwem ọhụrụ, ma na a Prorider dị nnọọ jidere mpi na otu, anyị kwubiri na ọ bụ oge na-agbalị otu maka onwe anyị. Kedu ka igwe ịgba ọsọ na igwe zoro ezo na-eche yana ọsọ ọsọ anyị ga-agba ya? ♪ ♪ - Gini ka anyi nwere ebe a? Nke a bụ otu n'ime igwe kwụ otu ebe izizi ebe a na UK iji gosipụta moto zoro ezo. A na-echekwa ya ebe ahụ na tube oche ma na-eme ka ihe mgbakwasị ụkwụ dị n'okpuru site na pinion na Dan nwere ike gbanwee ya ma gbanyụọ ya site na njikwa aka - Batrị ahụ dị ebe a, n'ime karama ahụ, ị ​​nwere ike ịnweta batrị ndị nọ n'okpuru ebe a oche oche na-ezo n'elu engine ya onwe ya, ma ndị dị obere karị, o nwere a obere mkpumkpu na-agba ọsọ ma ọ bụ na-akwọ ụgbọala oge.
Ya mere, anyị na ajụjụ na-ere ọkụ mgbe ahụ. Ike ole, ọ na-adị ka ọ dị ize ndụ otu anyị siri guzoro ebe a, ike ole ihe a ga-agbakwunye? O doro anya na otu na 200 watts maka otu awa. - Ee, echere m na ezigbo ndị otu anyị ga - esiri anyị ike karị. ♪ - Olee otú ọ na-adị n'okporo ụzọ mgbe ahụ? Ọfọn, na-amalite na, anyị na-now na-aga na 25, 30 km kwa awa.
Ugbu a ọ bụ mmetụta dị egwu n'ihi na moto ahụ nwere oke oke na etu o siri gbanwee cranks, nke dị na 86 RPM, yabụ na ọ dị nwayọ nwayọ, mana ọ bụ naanị ebe ahụ n'azụ, ọ na - ewe, yabụ enwere m ike. .. ọma ihe m na-ekwu, m nọ na 50-11, anaghị m eme ọtụtụ.
Dan, ị na-eme ọtụtụ azụ n’ebe ahụ? - Ọ bụghị ihe ọjọọ - yabụ eziokwu na enweghị m ike ịgbanye ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa, ọ bụ ntakịrị ihe, mana anyị na-anya ngwa ngwa. ♪ - Ọ dị ezigbo iche na E-Bike ọ bụla m rutere n'oge gara aga ebe ị na-agagharị ma ị nwere ike ịnwe mmetụ moto na-enye obere oge ọ na-adị ka ihe ọzọ na-agba m ụkwụ. - M nwere ike iso na 200 watts, - Dị nnọọ gbatịa ntakịrị. - Ọfọn, ugbu a ọ bụ nke m iji kpata obere ihe mgbu n'akụkụ ahụ m hụkwara ya n'anya.
The ajụjụ, Otú ọ dị, bụ ma m na-eche nke a akpan akpan usoro a na-eji na Pro Pedalthon tupu. Ọ dị mma, echere m na ugbu a ka a hụrụ ya na nnukwu asọmpi na asọmpi agbanweela ma gbanwee echiche m, mana mgbe m chere banyere nke a, ọ ka siri ike ikwenye ya ka m wee nwee ike ịnụ na-esote ka m nnọọ ọma na-anụ ugbu a na m na-eche na nke ahụ ga-abụ otu ihe ahụ na etiti nke a pedal hoot. Ya mere, ha nwere ike nwetụ nwayọ, ha nwere ike ịbụ ọkaibe ugbu a na 2016, mana asịrị ahụ malitere ịmalite afọ ole na ole gara aga yabụ na ihe a nwere ike ịbụ ọnọdụ nka n'oge ahụ.
Ugbu a dị ka Si.A dị na mbụ, nke a bụkwa usoro ịrị elu, nke pụtara na arụmọrụ na-amalite na cadence n'okpuru 86. Ugbu a, o doro anya na e nwere otu maka ala dị larịị, nke pụtara na mgbe ọ ruru 100 ọ ka ga-enye gị ụfọdụ ume.
Nke ahụ ga-abụ ihe ezi uche dị na ya karị ma ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ n'ihi na n'ezie ọhụụ kachasị m mma maka ịrịgo dị ka nke a ga-abụ 90, ma ọ bụ ma eleghị anya ọbụna otu narị. Yabụ, nkata m ka bụ, opekata mpe, m nwere olile anya.- Otu ajụjụ ikpeazụ a ga-aza, Kedu ka igwe ọrụ a si arụ ọrụ? Ugbu a, anyị maara na ọ bụ ihe dị ka 150 watts, anyị tụrụ ya site na ike-mgbata n'azụ wheel, ma anyị na-na na gafee a karịsịa mkpari ọrịrị na ndịda nke England Mr.
Ya mere, ọ bụ oge eziokwu, n'ihe dị ka mita 100 m ga-atụgharị aka ekpe, m ga-eme ka injin m rụọ ọrụ ma hụ ma m nwere ike iti onwe m ihe. ♪ ♪ Yabụ, anyị anọghị nso site na elu ọzọ, Steve nọ ebe ahụ. O nwere ihe niile n’azụ ya ugbu a.
71 grams nke shuga
Oh enwere m ike ịhụ na m na-echeta otu ihe siri ike na nke ahụ. ♪ Ma anyị nọ n’ebe ahụ echere m - N’aka, ọ bụ oge maka nsonaazụ. Dan, olee mmetụta ị na-enwe? - Obere ezumike, mana enwere m afọ ojuju.
Echere m na ọ na-egosi na ịmalite adịghị mfe ọ bụla, ị na-anya ngwa ngwa na nke ahụ bụ otu ihe njin ahụ dịka nke ọma. Ya mere dabara Dan, ọduọ Dan, mere 7:02. Dan lara ezumike nká na Amotor, ọ ka ji nkeji na 14 sekọnd nwayọ - otu a ka ịnyịnya ibu si aghọ agbụrụ - ma ị dịla mma. - Ee - Aka nri, echere m na ajụjụ bụ mgbe ahụ ka ndị na - ele anyị anya ga - azụ ma jiri igwe zoro ezo zụta igwe ịgba ọsọ? Oh na mgbakwunye, ụgbọ mmiri a ga - enweta ọtụtụ, ọtụtụ injin doping n'ime afọ ole na ole sochirinụ? - Eeh, ajuju nke mbu dabere na ihe kpatara in’eji n’eji igwe gi.
Echere m na, ọ bụrụ na ị hụrụ mmetụta nke ibu ọnụ n'anya, ma ọ bụ oge ọ bụla ị na-apụ, ọ na-esiri gị ike ijide ndị ọkwọ ụgbọ ala ibe gị nwere ike ịbụ ndị na-eto eto, ọsọ ọsọ, ma ọ bụ nwee oge iji na-eme ihe karịa gị, mgbe ahụ, eche m n'echiche . - O nwekwara ike ịrụ ọrụ ụzọ ọzọ. Yabụ ọ bụrụ na ịnwere onye ọrụ ma ọ bụ enyi nwanyị na-arụ ọrụ nke malitere ịgba ịnyịnya ígwè, ma ọ bụ ikekwe di ma ọ bụ nwunye na-esiteghị ka gị, ma ọ bụ ikekwe nwa nwoke ma ọ bụ nwa nwanyị nọ n'afọ iri na ụma nke na-enweghị ike ijide onwe gị, nye ha igwe kwụ otu ebe nwere igwe zoro ezo n'ime ya bụ ụzọ dị mma maka gị abụọ iji nweta ihe na njem ahụ, jiri ezigbo otu mbọ, mara mma na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ha nwere ike ijide nke ọma. - Ma gịnị banyere echiche nke iru ihe? Nke a bụ ihe ga-adị anyị niile mkpa n’oge ụfọdụ ka anyị chee ya ihu, mgbe ịnwere injin ya, ọ bụghịzị KOM gị ị ga-enweta ma ọ bụ enwetaghị.
Ọ bụghị gị ka ị ga-emeri ugwu ma ọ bụ na-achịkwa otu ịnyịnya mpaghara. Yabụ, ọkachasị ma a bịa n'ịrụ ọrụ, ọ bụ ụdị ihe dị mkpa ka anyị niile jiri igwe kwụ otu ebe, ọ bụghị ya? Na nke ahụ ugbu a kpamkpam.- Ee ka anyị chee ya ihu, onye ọ bụla chọrọ ịga ngwa ngwa nwere ike ịga n'ihu ịzụta ezigbo ọgba tum tum kama ịnwe igwe nwere zoro ezo dị ka nke a, yabụ echeghị m na anyị bụchaghị na-aga ọtụtụ ga-enwe nsogbu ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ndị a ga-abụ ebe a na-ahụkarị na ọha na eze n'ime afọ ole na ole sochirinụ, ọ bụrụhaala na a ga-egbochi ha asọmpi ọ bụla.
Ee, mana ọ bụrụ na ha na-ewetara ọtụtụ mmadụ ọrụ ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ site na igwe kwụ otu ebe, nke ahụ bụ ihe dị mma. Ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ na-enyere ọtụtụ ndị mmadụ aka ịpụ apụ na ịnya ụgbọ ala ma nwee ọ itụ na ya, mgbe ahụ nke ahụ dịkwa mma. Echeghị m na ọtụtụ ndị nwere igwe zoro ezo ga-egosi agbụrụ otu agbụrụ ha ma ọ bụ ndị otu mpaghara na-agba ịnyịnya, ọ bụ ezie na onye nzuzu ma ọ bụ abụọ ga-adị mgbe niile - ihe dị egwu bụ Si, nke ahụ bụ ezigbo iwe na-agba ịnyịnya nwetara n'ezie abanyela aka na mmadụ .- Amaghị m onye gaara eme ya.- Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ Col de la Madone zuru oke nke ị mere na igwe eletrik, ịnwere ike ịchọta ya ebe ahụ.- Ma ọ bụ ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịchọta ihe ngosi GCN kachasị ọhụrụ ebe anyị na - eme ka ị dị ọhụrụ na ihe niile Top Gun n’ịgba ịnyịnya ike ị nwere ike ịpị ebe ahụ n’okpuru - Anyị nwere ihe abụọ ị ga - achọ ịme tupu ị lelee otu n’ime isiokwu ndị a.
Kedu ihe bụ ịgba ígwè?
Mgbapu moto, ma ọ bụn'ibu doping, na asọmpiịgba ígwèokwu, bu uzo eji aghugho site na iji ihe zoro ezomotoiji nye aka ịkwalite ịgba ọsọigwe. Okwu a bu ihe putara ihe na chemicaldopingn'egwuregwu, n'ịghọ aghụghọ ule site n'iji ọgwụ na-eme ka arụ ọrụ na-arụ ọrụ.
Kedu ndị ọgba ịnyịnya ịnwụrụ?
Ihe ndị a bụ ndepụta ezughị ezu nkedopingikpe na ugboro ugboro ebubo nkedopingna ọkachamaraịgba ígwè, ebeedopingpụtara 'iji ihe eji eme ihe ma ọ bụ usoro na-adịghị mma iji nweta mmụba nke arụmọrụ'.
Ndi Lance Armstrong jiri ọgwụ doping?
Lance Armstrong, onyenweremeriri aha asaa nke Tour de France ruo mgbe a mara ya ikpe maka iji PEDs na akụkọ 2012, nwere ike ịbụ ọgwụ aghụghọ kachasị ama naịgba ígwè, ma ọ bụrụ na ọ bụghị egwuregwu egwuregwu.
Nye ghọrọ aghụghọ n’ịgba ịnyịnya ígwè?
Lance Armstrong nwere ike gbanween'ịghọ aghụghọ ulen'ime ụdị nka, mana ikwe ka iwu bụrụ ihe jupụtara ebe niile kemgbe mmalite. Ọgwụ ọjọọ, ọbara doping, agbụrụ idozi, Jersey tugging, ike ike ịnya, n'uzo na ezighi ezi pacing, ịdọrọ, na-ewere mkpirikpi - ọkachamaraịgba ígwèahụla ọtụtụ mmejọ na afọ.
Onye mepụtara ihe eji arụ ọrụ?
Ihe nkiri US TV '60 nkeji' agbasawo mkparịta ụka ya na Istvan 'Stefano' Varjas, onye a na-ahụta dị ka onye mepụtaran'ibu dopingteknụzụ. O kwughachiri nkwenkwe ya na ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-eji moto ahụ - mana o kwuru na ya enweghị ike ịkpọ ndị ọ bụla na-agba ịnyịnya.30.01.2017
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè pro ka na-doping?
Iji ọgwụ ọjọọ eme ihe naịgba ígwèka bu okwu di nkpa. Otu onye ọkachamara a na-akpọghị aha ma 'na-asọpụrụ'onye na-agba ígwèchere na pasent 90 nke ndị ọkà mmụta peloton na-aga n'ihu, ọ bụ ezie na “o chere na ọ dị obere ndị ọrụ nhazidopingn'ụzọ otu ìgwè siburu ọrụ, ”dị ka akụkọ ahụ si kwuo.
ww arụmọrụbike nwere
Kedu ọgwụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-eji?
Ihendị na-agba ígwè'Erythropoietin kachasị amasị ya, emeela ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu atọ karịa mmachi dị ka PED na-esote ewu ewu. Lance Armstrong kpọrọ EPO '10% -er' na aogwuna ị dị nnọọ nwerenara. Ọ na - eme ka ọbara uhie uhie na ikuku oxygen na - agafe na akwara maka ike na ume.
Ndi pro ịgba ígwè ka na-agba doping?
Ma, ojiji nke arụmọrụ eme bekee abụghị ihe ọhụrụ naịgba ígwè. N’ezie, egwuregwu ahụ echewo okwu a ihu ruo ihe karịrị otu narị afọ, a ga-enwerịrị ogologo oge karịa egwuregwu ọ bụla a haziri ahazi.16 jul. Dec 2019
Kedu igwe ọgba tum tum Lance Armstrong jiri?
Mee njem 5500igwejiriLance Armstrongna 2000 Tour de France | National Museum nke American History.
nsị ịgba maka ndị ọgba ọsọ
Kedu ihe pụtara doping?
: iji ihe (dika anabolic steroid ma obu erythropoietin) ma obu ihe eji eme ihe (dika obaradoping) iji meziwanye egwuregwu.
Kedu ihe bụ iwu maka ịhazi igwe na ịgba ígwè?
Nlele ahụ gara n'ihu na Oge Ochie, na 11 anyịnya igwe si Trek Factory Racing, Etixx-Quickstep na TInkoff-Saxo na-enyocha na mpaghara pụrụ iche nke UCI guzobere. UCI setịpụrụ iwu maka aghụghọ nke teknụzụ, dịka ha na-akpọ doping injin, na-enye ndị na-agba ịnyịnya opekata mpe nke ọnwa isii na mma nke dị n'etiti 20,000 na 200,000 Switzerland Franc.
Kedu ka usoro doping si yie ọgwụ doping?
Okwu a bu ihe eji eme ogwu na egwuregwu, cheghọ aghụghọ ule site na iji ogwu na eme ka aru oru. Dị ka ụdị 'aghụghọ aghụghọ' nke Union Cycliste Internationale machibidoro ya, òtù na-achị ụwa nke ịgba ịnyịnya ígwè.
Nye bụ onye mbụ na-agba ịnyịnya ígwè ka ọ kwadoro maka usoro ihe eji arụ ọrụ?
Van den Driessche, onye mbu gbaziri ịnyịnya ígwè ka ọ nye iwu maka igwe ọrụ. Ngwunye doping, ma ọ bụ ihe eji arụ ọrụ igwe, na okwu ịsọ mpi na-asọmpi, bụ usoro nke ịghọ aghụghọ ule site na iji moto zoro ezo iji nyere aka ịkwalite igwe ịgba ọsọ. Okwu a bu ihe eji eme ogwu na egwuregwu, cheghọ aghụghọ ule site na iji ogwu na eme ka aru oru.